Belize neCosta Rica zvinopindura zvido zvitsva zveCDC zvekufamba kweUS
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Belize neCosta Rica zvinopindura zvido zvitsva zveCDC zvekufamba kweUS
Belize Breaking Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Costa Rica Kupwanya Nhau • Hurumende Nhau • Health News • nhau • Kuvakazve • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Jamaica inowedzera COVIDE-19 kuyedzwa
Sezvo nyaya dze COVID-19 dzichienderera mberi dzichimhanyisa muAmerica, CDC yeUS yakamisa mutemo mutsva kune wese munhu anopinza nyika. Vafambi vese zvino vanozodikanwa kuti varatidze humbowo hweyakaipa COVID-19 bvunzo vasati vatanga kufamba. Nyika dzakatenderedza pasirese dziri kutanga kupindura.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) yakazivisa nezuro kuti ichada kuongororwa kwakaipa kweCOVID-19 kubva kune vese vafambi vanosvika muUnited States kutanga muna Ndira 26, 2021. Nhasi, Belize neCosta Rica vazivisa hurongwa hwavo mukupindura iyi nyowani. CDC inodikanwa yekufamba kweUS.
Mukupindura izvi itsva CDC inoda, Belize Tourism Board (BTB), mushure mekubvunzana neBelize Ministry of Health and Wellness, yakasimbisa kuti kuyedzwa kuchawedzerwa uye kuwanikwe kune vese vafambi vanobva kuBelize kuUS.
Zvimwezve ruzivo zvinosanganisira mutengo uye nzvimbo dzekuyedza pasirese zviri kutemerwa. Vanhu vese vanoronga kushanyira Belize vanogona, nekudaro, kuenderera nehurongwa hwavo hwekufamba.
Belize Tourism Board inoziva kuti vafambi veUS vanoverengera vangangoita 70% yevashanyi munyika. Tourism Board yakati ichaenderera ichitungamirwa nezvirongwa zvehutano zvekugamuchira vese vashanyi uye kuona chiitiko chakachengeteka kubva pakusvika kusvika pakuenda.
Costa Rican Tourism Institute yakagovana: "Tichifungidzira kuti hurumende ye United States of America tinogona kutora chiyero chakadai, takagadzira boka rinoshanda riri kubatana nemarabhoritari akazvimirira akasimbiswa neHurumende yehutano kupa bvunzo dzeRT-PCR mu Kosita Rika. Zano nderekuti bvunzo idzi dziwanikwe kune vafambi veUS nevashanyi vemamwe marudzi munyika yese, pasi pemadhora zana pamunhu.
“Nyika iri kusangana nedenda rine muitiro wekutora matanho nekugadzirisa shanduko pane nhunzi. Costa Rica inzvimbo yakazvipira kutevedzera zviga zvehutano, uye tinotenda vafambi nekuvimba kwavo. ”
Nhau idzi dzinosvika sehuwandu hwevanosvika kuCosta Rica nhamba dzinosvika zvakapetwa kaviri kubva munaNovember kusvika Zvita. Zvita 2020 yakanyoreswa kupinda kwevashanyi 71,000 nendege, ingangoita zvakapetwa kushanya kwakanyoreswa munaNovember 2020, panguva iyo 36,044 yakataurwa. Kuwedzera uku kuri kukonzerwa nechikamu chekudzoka kwendege makumi maviri kubva kumisika mikuru yeCosta Rica uye kuziviswa kwenzira nyowani pakupera kwegore.